China YF-H-211 Pink Vurtt Nightstands 2 Drawers Wood Nightstand Bedside latabatra Gold Base mpanamboatra sy mpamatsy | Yifan
tsy misy YF-H-211
TOETOETRA Fitehirizana, vatasarihana
KEVITRA Birao MDF manjelanjelatra ambony + Vélte + tongotra vy tsy misy fangarony
Fomba maoderina: mampiseho Silhouette milahatra madio miaraka amina fotony volamena miendrika U, dia mamorona rivo-piainana milamina maoderina ao an-tranonao. Ny loko mavokely dia azo amin'ny alàlan'ny fametahana tanana, noho izany dia hisy loko kely / tonal kely isaky ny sanganasa. latabatra amam-pandriana misy endrika feno voaravaka amin'ny hoditra faux ho an'ny faritra malama miaraka amin'ny bokotra kristaly voaravaka mandritra ny fotoana fohy mba hamoronana vokany maso manjavozavo
Ity takelaka nofonosina vita amin'ny hoditra ity dia misy vatasarihana mitarika roa, mipetraka amin'ny tongony toradroa. Hita amin'ny famaranana, habe, na fanaingoana. Fanamarihana fikirakirana fikirakirana tsy maintsy omena ary mamela fanaingoana miavaka.
Ampy fitehirizana: Miaraha amin'ny vatasarihana 3, manolotra fomba mahomby sy kanto izy io hanangonana tahiry ho an'ny magazine, cosmetika, finday, sns.
Mora ampiasaina: Miaraka amin'ny gazety miavaka hanokafana ny famolavolana, ity takelaka ity dia manome fiasa tsy misy ezaka ary manintona manokana ihany koa.
Ny MDF vita tanana amin'ny tongotra vy; MDF dia hazo vita amin'ny maotera izay manome hery tsy manam-paharoa ary miantoka ny fahamendrehan'ny mpanao akanjo amin'ny fotoana.
Fitaovana lehibe: Ampy ho an'ny jiro eo am-pandriana sy famantaranandro fanaingoana ny tampon'ny ambony. Ny vatasarihana 2 dia manome toerana malalaka ho an'ny entanao.
Fanorenana mafy orina: fifangaroana tanteraka amin'ny volory vita amin'ny volo, hazo matevina ary vy tsy misy fangarony, ity fijoroana amin'ny alina ity dia matanjaka sy maharitra mandritra ny androm-piainana lava.
Manantena aho fa hankafizinao io famolavolana vokatra io. Ankoatr'izay dia manana fomba volontany mainty koa izy hisafidianana anao. Tena mety amin'ny mpiasan'ny birao ankapobeny, ny loko no tsara karakaraina!
Previous: YF-H-210 Latabatra lafo vidy fotsy sy volamena 3 mpantsaka sary ery ambony latabatra fandrefesana am-pandriana
Manaraka: YF-H-212 h Tabilao ambony latabatra fandriana amam-pandriana miaraka amina fotony metaly volamena
Takelaka misy ny laptop
Latabatra eo am-pandriana
Fitaovana fandriana amin'ny latabatra fandriana
Latabatra fandriana vy
Latabatra fandriana lafo vidy
Latabatra fandriana maoderina
Tabilao fandefasana multifunction
Latabatra fandriana amin'ny alina mitsangana
YF-H-209 Modern 3 Sariitera Volo mainty Lacquer N ...